EVY's Kitchen: Baking Principle - ကိတ်မုန့်ဖုတ်ရာမှာသိသင့်တဲ့ အချက်ကလေးများ
Baking Principle - ကိတ်မုန့်ဖုတ်ရာမှာသိသင့်တဲ့ အချက်ကလေးများ
ကျွန်မ စပြီးမုန့်ဖုတ်တုန်းက အကြိမ်အခါပေါင်းများစွာ ပျက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်တဲ့နေရာမှာ အပူချိန်ကစပြီး မွှေတဲ့နည်းစနစ်လေးတွေကအစ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါတွေကို သေချာမသိပဲ လုပ်နည်းတွေပဲ ဖတ်ပြီးထင်သလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့မုန့်တွေ ပျက်တာလည်း သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူးနော်။ နောက်တော့ ကျွန်မ Singapore မှာရှိတဲ့ မုန့်ဖုတ်သင်တန်းကျောင်း (Baking Industry Training Centre – BITC) မှာ သွားတက်လိုက်တော့မှ နည်းစနစ်ကလေးတွေကို သိရပြီး တော်တော်အဆင်ပြေလာပါတယ်။ ခုလည်း ကျွန်မလိုပဲ စမ်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေဖို့ ကျွန်မသိတဲ့ နည်းလေးတွေကို မျှဝေပေးသွားပါ့မယ်။
မုန့်ဖုတ်တဲ့ နေရာမှာ သတိထားရမယ့် အချက်ကလေးတွေကတော့
သုံးတဲ့ Ingredients တွေအားလုံးဟာ room temperature ဖြစ်ရပါမယ်။ ထောပတ်တို့ ကြက်ဥတို့ဆိုရင်လဲ ရေခဲသေတ္တာထဲကနေ အနည်းဆုံးနာရီဝက်လောက် အပြင်ထုတ်ထားပြီးမှ မုန့်ဖုတ်ပါ။
Oven အပူချိန်ကို မုန့်ဗန်းမထည့်ခင်ကတည်းက ကြိုပြီးလိုအပ်တဲ့ အပူချိန်ပေးရပါမယ်။
ဂျုံကို အမြဲစကာစစ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ၂ ခါလောက်စစ်ပါ။
ဂျုံမွှေတဲ့နေရာမှာ လက်နဲ့ပဲမွှေပါ။ တအားကြီး အတင်းမမွှေရပါဘူး၊ စက်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း တော်တော်ကို ဖြည်းဖြည်းလေး လည်တဲ့ speed (လက်နဲ့မွှေသလောက်နှေးတဲ့ speed) ကိုထားပေးပါ။
Recipe မှာနို့ စသဖြင့် အရည်တွေကို အသုံးပြုဖို့လိုလာရင် ဂျုံမွှေတဲ့ အဆင့်မှာ ထည့်မွှေပေးပါ။ အမြဲတမ်း ဂျုံနဲ့ စပြီး ဂျုံနဲ့ အဆုံးသတ်ပါ။ ဆိုလိုတာက ဂျုံကို ၃ ပုံပုံ၊ နို့ကို ၂ ပုံပုံ။ ဂျုံအရင်ထည့်မွှေ၊ နို့ထည့်၊ ဂျုံပြန်ထည့်၊ နို့ထပ်ထည့် ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကျန်တဲ့ဂျုံကို ထည့်မွှေပေးဖို့ပြောတာပါ။
ဒီနည်းလေးတွေကို လိုက်နာပြီး မုန့်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အပျက်အစီးနဲသွားမယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေးကို စာအုပ်မှာဖတ်ပြီးသွားပြီ ပြန်မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေုးဇူး...။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါမယ် တို့မ ရေ :)
မမ ရေ .. မသိတာလေးတွေ ခုလိုရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ ..နောင်လဲ ဆက်ရေးပါအုံးနော်..
အားပေးလို့ကျေးဇူးအထူးပါ မမိုးငွေ့နဲ့ အန်တီဦးရေ။ ဟုတ်တယ် မမိုးငွေ့ရေ စာအုပ်ထဲမှာရေးပေးပြီး ဘလော့မှာတင်ပေးဖို့ကို ခုမှသတိရလို့ :-)
မြန်မြန်ဆန်ဆန်အားပေးတဲ့ ဒေါ်ကျူတီနဲ့ ချို့ကိုလေးကျေးဇူး :D <3 <3
သတိထားသင့်တဲ့ အချက်ကလေးတွေ မှတ်သားသွားတယ် EVY ရေ။ ကျေးဇူးနော်။
ဒီအချက်တွေ ဖတ်မိမှပဲ တကယ်တမ်းမှားနေတာတွေကို တွေ့ရတော့တယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
သေချာမှတ်သားထားလိုက်ပါပြီ.evy ရဲ့ မုန့်ကလေးတွေကို အားကျလို့ အချိန်ရရင် မုန့်ဖုတ် သင်တန်းတက်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ချင်မိတယ်...စေတနာထားပြီးတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
I am also interested in attending BITC. How is it? Can you sharealil bit more about training center. Thank you.
စာတွေ မပေါ်လြို ဖတ်မရဘူး အမရေ ။